NS Malagasy Archive | NewsMada | Page 1453
Lozam-pifamoivoizana – Anjomakely : nifandrotehan’ny olona ny entana nentin’ilay kamiaobe nivadika
Par Taratra sur 22/02/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Tsy gisitra amin’ny zava-mitranga ny mpanararaotra. Nifandrotehan’ny olona nanatri-maso sy nahita ny loza nihatra tamin’ity kamiaobe iray, tapaka ”frein” ary nivarina an-tanimbary, tetsy Anjomakely, ny asabotsy teo, ny entana. Naratra mafy ny mpamilin’ilay kamiaobe sy ny mpanampy azy vokatr’ilay lozam-pifamoivoizana nitranga teny Anjomakely, akaikin’ny Resto Gasy, ny asabotsy tolakandro teo. Voalaza fa noho ny […]
Lalaon’ny Nosy (JIOI 2019) : hiadiana medaly volamena koa ny Rugby à 7
Par Taratra sur 20/02/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Taranja vaovao ho an’ny lalaon’ny Nosy 2019, hatao any Maorisy, ny Rugby lalaovina olona fito. Ankoatra izay, 14 ny isan’ny lalao hiadiana medaly volamena, ho an’ity andiany fahafolo ity. Tapaka nandritra ny fivoriana nataon’ny filankevitra iraisam-pirenen’ny lalao (CIJ), natao tatsy Maorisy fa anisan’ireo taranja hiadiana medaly volamena koa ny rugby lalaovin’olona 7, ho an’ny sokajy […]
Kitra malagasy : nahazo fitaovana avy amin’ny Telma ny FMF
Par Taratra sur 20/02/2016 Divers, NS Malagasy
Hotanterahina anio, any Fenoarivo Atsinanana ny fivoriamben’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Manoloana izany, nanolotra fitaovana toy ny “Power box” 4G, ho an’ireo filohan’ny ligim-paritra 22 ny orinasan-tserasera Telma Madagascar. Mba hahazoana mifanerasera sy mifampita vaovao amin’ny samy tomponandraikitry ny ligy, ny antony voalohany. Eo koa ny “routeur wifi”, hahafahana mifandray amin’ireo mpikambana eo anivon’ny […]
Lomano – Mada Jeunes : hiady filaharana ireo ligim-paritra efatra
Raikitra. Hotanterahin’ny federasiona malagasin’ny lomano, amin’ity faran’ny herinandro ity (asabotsy 20 febroary sy alahady 21 febroary), ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny sokajy tanora. Etsy amin’ny dobo filomanosana Olympika ANS Ampefiloha kosa no hizoran’ny fifaninanana mandritra io roa andro io. Raha ny vaovao voaray, indray hiady ny lohany amin’izany ny ligim-paritra efatra : Analamanga, […]
«Course pour la solidarité féminine» : anisan’ireo hifaninana i Dah Mama
Efa mihamaro hatrany ireo olon-tsotra sy orinasa ary fikambanana, misoratra anarana, amin’ilay fifaninanana «Course pour la solidarité féminine», karakarain’ny fikambanan’ireo Malagasy niatrika ny “Lalao Olympika” (Amao). Anisan’ireo nanambara ny fahavononany hiatrika ity fihaonana ity i Dah Mama, ary hitarika ireo mpanakanto namany handray anjara amin’izany. «Amiko, rehefa mifono firaisankina sy fampiarana ny miralenta ny zavatra […]
Hevitry ny mpiasan’ny kaominina sasany : mba hisian’ny korontana ny fanenjehana ireo mpivarotra
Par Taratra sur 20/02/2016 Economie, NS Malagasy
Tsy tapaka mitombo isa hatrany ny mpivarotra amoron-dalana eto Antananarivo. Tsy eo Analakely enjehin’ny kaominina ihany, fa feno azy ireo Behoririka, Mahamasina, 67 ha, Isotry, saika manerana ny Renivohitra. Ao ireo efa manana ny toerany manokana, fa ao koa ireo manao varo-mandeha manerana ny tanàna hatrany anelakela-trano. Tsy mahasakana ireo mpivarotra ireo mihitsy ny ataon’ny […]
Manakhasy : nahomby ny « Zegnahary mahery »
Par Taratra sur 20/02/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Nifarana ny 17 febroary teo, teny amin’ny Craam eny Ankatso, ny « Zegnahary mahery », hetsika lehibe voalohany nampahafantarana sy namerenan’ny tarika Manakhasy indray ny hasin’ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao ary, indrindra, ny maha Malagasy antsika. Natomboka tamin’ny fampisehoana izany, satria, tsiahivina fa mpanakanto mandala tanteraka ny mozika nentim-paharazana, avy amin’ny faritra rehetra manerana ny Nosy, […]
Basikety – Coupe du Président : hidona amin’ny 2BC Vakinankaratra ny ASB Itasy
Hangotraka ny manasa-dalan’ny fiadiana ny “Coupe du Président” taranja basikety, ho an’ny Zone Ouest any Tsiroanomandidy, amin’ity indray mitoraka ity. Araka ny efa fantatra mantsy, ekipan’i Vakinankaratra roa, 2BC sy Fanatic, indray tafakatra hiatrika ny manasa-dalana avokoa, miampy ireo ekipan’Itasy sy Bongolava, mpampiantrano. Eo amin’ny fihaonana voalohany, anio, ny 2BC hidona amin’ny ASB avy any […]
Gadona vaovao : namorona ny « zag zig » i Blezz’o
Andriamiaramanana Dimbiniaina Duc, fantatra eo amin’ny tontolon’ny zavakanto amin’ny anarana Blezz’o. Hafa noho ny efa faheno hatramin’izay ny gadon-kira noforoniny. « Zag zig », fitambarana gadona samihafa hita eto Madagasikara. Ao anatina hira iray, ahenoina gadona avy any atsimo, andrefana, atsinanana ary avaratry ny Nosy. Tombony lehibe ho an’i Blezz’o ny fananana feo avo dia avo sy […]
Vokatra labiera : niova tsiro sy endrika ny Skol
“Vao mainka…”, hoy ny dokambarotra fanairana, efa nandeha tamin’ny fahitalavitra, andro vitsivitsy izay. Tsy nisy nahalala hoe inona no tao ambadik’izay, raha tsy nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety omaly, teny amin’ny foiben’ny orinasa Star Andraharo. Mahakasika ny labiera Skol izy io, izay fantatra fa niova endrika fa indrindra niova tsiro ihany koa. “Ao […]
Ihorombe : namboly zanakazo 3.000 ny faritra
Nosantarina ny 29 janoary teo ny taom-pambolen-kazo any Ihorombe, nosantarin’ny lehiben’ny faritra, Mosa Ferdinand. Nambolena teny amin’ny toerana akaiky loharano any Ihosy ny zanakazo 3.000, mamatsy ny rano ny renivohitr’Ihorombe rahateo. Notohizana tany amin’ny kaominina Soamatasy, ny fambolen-kazo ny 16 febroary teo, tao amin’ny tokotanin-tsekoly roa sy ny toby fahasalamana, niarahana tamin’ny fokonolona. Nisy koa […]
Atsimo Andrefana : niakatra 200 % ny hetra niditra ny taona 2015
Tanteraka ny 16 febroary teo, teto Toliara, ny fihaonana teo amin’ny mpandraharaha sy ny avy ao amin’ny sampandraharaha fampidiran-ketra, nanamafisana ny fanentanana ny rehetra hanao fanambarana mazava mahakasika ny vola aloa amin’ny fanjakana. Nampahafantarina ireo karazan-ketra voarakitra ao anatin’ny tetibolam-panjakana 2016 takina amin’ny mpandraharaha eto Madagasikara. Natao izany fampahafantarana izany mba hialana amin’ny hosoka. Noho […]
Antsirabe : namboly zana-kazo 1 000 ny Fiova
Nanatanteraka adidy amin’ny alalan’ny fambolen-kazo fanao isan-taona ny Fivondronan’ny orinasa ao Vakinankaratra (Fiova) ho fiarovana ny tontolo iainana, ny asabotsy lasa teo. Mpiasa tsy latsaky ny 300 avy amin’ireo orinasa isan-karazany mpikambana ao anivon’ny Fiova notarihin’ny filohany, Ramarijaona Andrianjafy, no nandray anjara. Eny amin’ny fokontanin’Ambatolahy, kaominina ambanivohitra Vinaninkarena, distrikan’Antsirabe II, no misy ny toerana natokan’ny […]
Fifaninanana « Hackathon » : ny Malagasy irery no mpianatra tamin’ny famaranana
Valo ny ekipa nandray anjara tamin’ny famaranana fifaninanana Hackathon natao tany Dakar Senegal. Fifaninanana nokarakarain’ny Société générale, orinasa renin’ny BFV-SG eto Madagasikara, nifantoka tamin’ny famoronana tetikasam-pampandrosoana mifandrainka amin’ny Teknolojian’ny informatika sy ny fifandraisana (Tics) ankehitriny. Lohahevitry ny tetikasa noforonin’ny Malagasy ny antsoina hoe Digi Bank, ary nankasitrahan’ny BFV-SG satria azo ampiasaina tsara any amin’ny banky […]
Fandidiana katarakta : mpitsabo sivy voaofana amin’ny MSICS
Par Taratra sur 20/02/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nahazo ny taratasy manamarina ny fahavitan’ny fiofanany ny dokotera mpandidy maso sivy omaly, teny amin’ny HJRA. Nianatra momba ny fomba fandidiana amin’ny teknika vaovao ny katarakta MSICS izy ireo. Nanofana ny manam-pahaizana avy amin’ny ONG Amerikanina Help Me See. 150 eo ho eo ny mpandidy maso malagasy hanaraka fiofanana miandalana fa efa am-perinasa ireo voaofana. […]
Fiahiana : betsaka ny tetikasa ho an’ireo fianakaviana maniry ny hivoatra
Mitentina 71 tapitrisa Ar mahery ny saram-panavaozana ny toerana, etsy Ambalavao Isotry raha ny tatitra nataon’ny minisiteran’ny mponina. Betsaka ny tetikasa kasaina hatao ao an-toerana, kanefa tsy mbola manomboka izany hatramin’izao. Ankoatra ny fanajariana ny toerana ho azo honenana tsara, eo koa ny tohana manokana hatao amin’ireo fianakaviana angonina ao. Anisan’izany, ny tohana ara-tsaina sy […]
Radanoara Julien : “Tsy fanonganam-panjakana ny fitakiana ireo Nosy malagasy “
Mby aiza ny fitakiana ireo Nosy malagasy? Tsy fanonganam-panjakana ny fitakiana, nambaran’ny manampahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena, Radanoara Julien. Tsy fanonganam-panjakana ny fitakiana ireo Nosy malagasy, tsy fankahalana vahiny no atao, ary raharaham-pirenena ho an’ny Malagasy ny fitakiana… Anisan’ny nifampidinihan’ny avy amin’ny firaisamonina sivily sy ny manampahaizana malagasy ary ny mpitsara iraisam-pirenena avy any La […]
Ambalavao Isotry : sarotra ny mifehy ireo 4’mi hanaraka ny fitsipika
Iray volana latsaka izay no nampiantranoina ireo 4’mi, tsy manan-kialofana, etsy amin’ny centre MadCap teo aloha, Ambalavao Isotry. Nahatratra 93 ireo fianakaviana indray nampidirin’ny minisiteran’ny mponina tao teny am-piandohana. Efa 20 sahady anefa ireo niala satria tsy tamana. “Tsy mahazaka ny fifampifehezana ato an-tanàna ny ankamaroan’ireo fianakaviana sahirana nampidirina eto. Efa zatra ny baranahiny tany […]
Par Taratra sur 20/02/2016 En Bref, NS Malagasy
Hahazo ny vatsim-pianarana tsy ho ela ny mpianatra tao anatin’ ny lisitra fanampiny eny amin’ny oniversiten’Antananarivo, araka ny fampitam-baovao nataon’ny mpianatra, omaly. Efa mipetraka eny anuvon’ny fakiolte rehetra ny lisitra sy ny daty hanefana ny vola. Mahatratra 1 095 ny isan’ny mpianatra miandry ny vatsim-pianarana amin’ny lisitra fanampiny ho an’ny eto Antananarivo. Sivy volana ny vatsim-pianarana […]
Antoko Malagasy miara-miainga : « Tsy hamaha olana ny fanovana governemanta »
Par Taratra sur 20/02/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Nitondra ny heviny manoloana ny raharaham-pirenena ny eo anivon’ny Antoko Malagasy miara-miainga (AMMM). « Tsy hahavaha olana ny fanovana ny governemanta na fanoloana ny mpikambana sasany na fanesorana ny Praiminisitra raha izao fomba fiasan’ny fitondrana izao…», hoy ny birao politika, Ramaroson Laurent, omaly tamin’ny resaka nifanaovana taminy. Nohitsiny fa tsy mandeha amin’ny laoniny intsony ny fiainam-pirenena […]
Ambohimangakely : fiara 404 bâchée nifandona tamin’ny kamiaobe
Samy naratra ny mpamily ! Nifandona teny Andranovao Tetezamby Ambohimangakely pk 11+400 ny kamiaobe iray sy fiara 404 bâchée iray , omaly antoandro tamin’ny 11 ora. Araka ny fanazavana voaray avy any Toamasina hihazo ny renivohitra ilay kamiaobe ka nanana olana ara-teknika tampoka ny fiara ka nifandona tamin’ilay fiara 404 bâchée avy any Ambohimalaza hihazo an’Ambohimangakely. […]
Praiminisitra Ravelonarivo : « Inty aho ary mbola miasa »
Mazava ny resaka. « Inty aho. Miasa aho. Malalaka ny fanehoan-kevitra na hiteny fanovana governemanta injato eo aza », hoy ny Praiminisitra Ravelonarivo Jean, omaly tao amin’ny haino aman-jerim-panjakana, RNM, omaly hariva. Midika izany fa tsy mitombina velively ny resabe any anaty tranonkalam-pifandraisana any nilaza ny fametraham-pialan’ny lehiben’ny governemanta, afakomaly alina tokony ho tamin’ny iray ora maraina. […]
Vita sonia, afakomaly teny Iavoloha, ny hamatsiantsika sakafo ireo firenena aty amin’ny ranomasimbe Indianina (COI). « Tsy hanafatra izany any Azia intsony izy ireo ary hiteraka tombontsoa ho antsika », hoy ny minisitry ny Fiarovana, Rakotozafy Dominique, afakomaly. Eo koa ny fametrahana foibe iraisana hanarahana maso ny fivezivezen’ny sambo sy ny entana ary ny olona aty amin’ny […]
Teratany sinoa iray 44 taona no tratran’ny lozam-pifamoivoizana teny Ambohidratrimo, afakomaly teny Antongombato Ambohidratrimo. Nifandona tamin’ny fiara iray nijanona teo amoron-dalana ny fiara nitondra ilay Sinoa. Voalaza fa resin-tory tampoka ny mpamilin’ilay Sinoa ka nifatratra tamin’ilay fiara nijanona. Nentina teny amin’ny hopitalin’i Mahitsy ilay Sinoa niharam-boina. Ny borigadin’ny zandary ao Mahitsy no manao ny fanadihadiana.
Nitondra valin-kafatra. « Fanosoram-potaka ireny an-gazety ireny. Miseho koa izany fa efa hanova ny mpitantana ny eo anivon’ny FJKM ka tsy mahagaga. Misy mpanao politika sasany te hampiditra ny olony amin’ny fitantanana ny fiangonana ary efa voamarinay izany », hoy izy, omaly tamin’ny haino aman-jery iray, nitondra fanazavana. Nohitsiny fa efa fantatra avokoa ny momba izany rehetra […]
« Précédent 1 … 1 451 1 452 1 453 1 454 1 455 … 1 498 Suivant »